Posted by Tranquillus | Oct 6, 2018 | Xafiiska
Shabakadaha bulshadu waxay leeyihiin faa'iidooyin badan, laakiin xishoodka iyo asturnaanta runtii qayb kama aha. Maaha wax aan caadi ahayn in la maqlo dadka naftooda ku ceebeeyay fariin xun darteed, xitaa mid duug ah. Tani waxay khatar ku noqon kartaa heer shaqsiyeed, laakiin sidoo kale heer mihnadeed oo si dhakhso leh u noqota dhibaato. Bog sida Twitter-ka ah oo dhan waa laga sii cabsi badan yahay iyadoo dabeecaddeeda degdegga ahi ay si dhakhso leh ugu horseedi karto raaxo-darro u dhexeysa dadka isticmaala internetka. Sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan nadiifino qoraalladayada, laakiin hawshu waxay si lama filaan ah ugu muuqan doontaa mid ka dhib badan sidii la filayay ...
Ma runbaa waxtar leh in laga saaro tweets?
Markaad rabto in aad ka saarto qaar ka mid ah tweets ama tirtirto dhammaan raadadka posts, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto niyad jabka ah oo isweydiiso haddii taasi run ahaantii waxtar leh. Waa inaan ka fekernaa sababtoo ah shabakadaha bulshadu waxay leeyihiin meel aad u muhiim ah oo hadda nashaadkeena ayaa naga horjoogsan kara.
Qof kastaa uma baahna inuu nafsadiisa difaaco, laakiin waxaa ugu fiican in laga taxaddaraa inta badan. Dhinaca kale, haddii aad tahay qof u xuubsiibanaya deegaan muxuu sawirku muhiim u yahay, qof uu mid ka mid ah rabi karo inuu waxyeelleeyo tusaale ahaan, waa inaad ilaalisaa naftaada sida ugu macquulsan. Sababta Way fududahay maxaa yeelay koonto kasta oo ka mid ah shabakadahaaga bulshada waxay halis ugu jiraan in la baaro illaa ay ka helayaan cunsur wax u dhimaysa Dadka ujeedo darrada ah ayaa ka qaadaya shaashadda shaashadda, ama waxay si toos ah kuugu soo qaadanayaan websaydhka (bogga, baloogga…) si ay u muujiyaan wax kasta oo bannaan. Sidoo kale waxaa ku khiyaanayn kara mashiin raadin, sida Google tusaale ahaan, oo tixraaci kara qoraaladaada wax u dhimaya natiijooyinkooda. Haddii aad rabto inaad hesho tweets ku habboon SEO, kaliya tag Google oo raadi tweets adoo ku qoraya magaca koontadaada iyo ereyga muhiimka ah "twitter".
Iyadoo aanad ka tirsaneyn dadwaynaha oo daawaday dhaqdhaqaaq kasta, waxay noqon laheyd mid aan fiicnayn saaxiibkaa ama mid ka mid ah maamulayaashaada si aad u hesho raadinta fikradaha xun, taasina waxay nasiib u leedahay inay si dhakhso ah u dhacdo, sababtoo ah qoraallayaasha xitaa gudaha gudaha in badan oo ka mid ah caado ka dhigashada shabakadaha bulshada si ay u helaan fikradda musharaxa u codsanaya boos ama hawl.
Sidaa darteed waa hubaal in sawir muuqda oo ku saabsan shabakadaha bulshada ay kaa difaaci doonaan dhibaatooyin badan, sidaas darteed tirtirto boggaga hore ee bogga Twitter wuxuu noqon karaa mid waxtar leh si looga ilaaliyo wax kasta oo aan fiicneyn. Laakiin marka, sidee?
Iska ilow tweets hore, arrin dhib badan
Twitter waa barnaamij aan fududeynin ka saarista tweets hore iyo hawshani waa mid aad u adag marka loo eego ka hor. Dhab ahaan, ka baxsan 2 000 tweets dhawaan, ma heli doontid inta kale ee ku saabsan waqtigaaga, iyo lambarkan si fudud loo gaari karaa goobta this tweet caadi ah ma aha wax caadi ah. Haddaba sidee ayaad u maamuli kartaa tirtirayaasha tweets? Waxaad u baahan doontaa inaad gacantaada u isticmaasho tweets farsamooyin farsamo badan oo adag. Hal shay waa hubaal, waxaad u baahan tahay sabir iyo qalab wanaagsan oo loogu talagalay xakameyn wax-ku-ool ah.
Tirtir fariimo dhowr ah ama sameyso nadiifin weyn
Ma lahaan kartid isku mid ah si aad u sameyso haddii aad rabto in aad tirtirto qaar ka mid ah tweets ama guud ahaan, si taxadar leh u feker intaadan go'aan ka gaarin inaad ka fogaato wax-qabashada aan loo baahnayn.
Haddii aad ogtahay tweets aad rabto in aad tirtirto, isticmaalka raadinta sare ka qalab (computer, smartphone, kiniin) si aad u hesho tweets aad si aad u tirtirto. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad nadiifiso dhamaan tweets-kaagii hore, waxaad u baahan doontaa inaad codsato kaararkaaga goobta si aad u kala saarto oo aad tirtirto tweet-kaaga. Si aad iyaga u hesho, waxaad ku qasban tahay inaad gasho xisaabaadka koontadaada iyo inaad sameyso codsi, habka uu yahay mid sahlan oo dhakhso ahna markaa maxaad u diideysaa?
Waxaa jira dhowr qalab oo kuu ogolaanaya inaad tirtirto tweets aad si fudud oo degdeg ah, sidaas darteed waxaa lagula talinayaa in ay helaan iyaga oo ah nadiifin wax ku ool ah oo aan qaban doonaa wax yaab leh.
Qalabka Tweet Deleter waa mid caan ah sababtoo ah waa mid aad u ballaaran. Run ahaantii, magaca magaciisu si cad u muujiyo, waxaa loo isticmaalaa in lagu tirtiro tweets. Waxay kaa caawineysaa inaad tirtirto tiro fara badan oo tweets ah markiiba thanks to ikhtiyaarka ah si ay u doortaan content ee tirtiraya sanadka tusaale ahaan. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad nadiifin weyn sameyso sanadka ugu horreeya ee tweets tusaale ahaan.
Laakiin qalabkani ma joogsado halkaa! Waxaad dooran kartaa tweets ku salaysan ereyada muhiimka ah iyo nooca nadiifinta iyo dhaqsaha badan. Haddii aad rabto inaad ka bilawdo xoqdo, qalabkani wuxuu sidoo kale u ogolaanayaa in laga saaro dhammaan hawlahaaga ku yaal meerkulka.
Tweet Deleter waa sidaas oo ah qalab wax ku ool ah oo rogrogmi kara si aad uhesho xisaab aan la xiri karin. Si kastaba ha noqotee, ma aha bilaash tan iyo markii ay bixin doonto 6 $ si ay ugu raaxaystaan. Laakiin qiimahaas, ma jiro wax xaddidan daqiiqad marka la eego waxqabadka la sameeyay.
READ Liis dhammaystiran oo Furaha Furaha Keyboard-ka On Windows 10
Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay dhibic aan lagama maarmaan u tahay inaad bixiso codsi kaa tirtiri kara tweet-kaaga, waxaad dooran kartaa Tweet Delete oo isticmaalkeedu yahay bilaash. Qalabkani wuxuu u shaqeeyaa adoo dooranaya taariikhda uu isticmaaluhu rabo inuu tirtiro tweets. Tweet Delete wuxuu daryeelaa inta hartay. Si kastaba ha noqotee, ficilkan lama saadaalin karo si aad u hubsatid doorashadaada inta aadan bilaabin. Haddii aad ka baqayso in aad ka qoomamayso xayiraadyada qaarkood, ha ka waaban inaad sameysid gurmad ah adoo dib u soo celinaya kaydkiiadii ka hor intaadan sameyn ficil kasta.
Sidee loo Nadiifiyaa Macluumaadkaaga Twitter-ka iyo ilaalinta Sawirkaaga? Agoosto 25th, 2020Tranquillus
horeMaxicours: tixraaca bixinta umeerinta internetka raqiis ah
socdaNadiifi astaantaada Facebook, faham muhiimadda shabakadaha bulshada ee muuqaalkaaga.